【 ဆောငျးပါး 】 “အပုပျခြိနျတှေ မြားနသေလား” | Opinion Leaders
【 ဆောငျးပါး 】 “အပုပျခြိနျတှေ မြားနသေလား”
ငယျစဉျကာလ ကြောငျးစာမေးပှဲဖွဆေိုကာနီး စာမေးပှဲအတှကျ အထောကျအကူမပေးနိုငျသညျ့ အလုပျမြိုးလုပျနသေညျ့အခါ ဆရာ/ဆရာမတှကေ “တယျ…. ဒီကလေးတှေ တျောတျောအခြိနျပိုနလေား အခြိနျပုပျအောငျလုပျနပေါလား” ဟု ဆူကွသညျ။အရှယျရောကျလို့ လုပျငနျးခှငျဝငျသညျ့အခါ ကြောငျးထဲ သငျဖျောသငျဖကျ ဆရာ/ဆရာမ တဈယောကျနှငျ့ ထှရောလပေါး ပွောကွသညျ့အခြိနျကွာနခေဲ့လြှငျ ဆရာကွီးက မကမြေနပျ ဗဈြတောကျဗဈြတောကျနှငျ့ “.. ဒီကောငျတှေ အခြိနျပိုနလေား… ၊ အပုပျခြိနျတှတေျောတျောမြားနပွေီ” ဟု ဆိုလရှေိ့၏။ထို့ကွောငျ့ စာရေးသူမှာထို “အခြိနျပုပျ=အပုပျခြိနျ” ဟူသော စကားရပျနှငျ့ အတျောလေးရငျးနှီးနမေိသညျ။သို့သျော စကား၏ နကျနဲသောအဓိပ်ပါယျကိုတော့ သတိသိပျမထားမိခြေ။
လုပျငနျးခှငျမှထှကျ ပွငျပလောကသို့ရောကျသညျ့အခါ ဘဝတက်ကသိုလျမှာ အပွငျးအထနျရုနျးကနျ နရေသညျ့ကာလကွမှ ထိုအပုပျခြိနျဆိုသော စကား၏ အဓိပ်ပာယျကို ထဲထဲဝငျဝငျ နားလညျသဘောပေါကျလာသညျ။ထို့အတူ စိတျထဲကလညျး ထိုအခြိနျကာလမြားကို ပွနျလညျနှမြောမိလသေညျ။အဘယျကွောငျ့မြားနညျး…. ။ ?
အပုပျခြိနျ (ဝါ) အခြိနျပုပျဆိုတော့ စကားရပျသညျ မွနျမာစာအဘိဓာနျတှငျ မညျသို့အဓိပ်ပယျဖှငျ့ဆိုထားသညျတော့ စာရေးသူမသိ။ကြှနျတျော နားလညျသဘောပေါကျမိသညျကတော့ - အကြိုးမရှိသညျ့အလုပျ (ဝါ) အဖွရှေိပွီးသား ပုစ်ဆာတဈပုဒျကို အခြိနျကုနျခံခွငျး၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ ဘယျလိုပဲကွိုးစားကွိုးစား ပွောငျးလဲမှုရှိမလာနိုငျသညျ့ နညျးလမျးကို ထပျဖနျတဈလဲလဲအသုံးခြ၍ အခြိနျကုနျဆုံးစခွေငျး (ဝါ) အကြိုးမဲ့ အခြိနျဖွုနျးတီးခွငျးဟု နားလညျမိလသေညျ။အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော စာရေးသူဝနျထမျးဘဝကကုနျခဲ့သော အခြိနျကာလမြားသညျ အထကျကဆိုသော ပုံစံမြိုးနှငျ့သာ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျကုနျဆုံးခဲ့ရ၍ဖွဈသညျ။
ထိုအခြိနျကာလမြားတှငျ သူမြားယောငျ၍ လိုကျယောငျကာ ကိုယျနှငျ့ မညျသို့မှမအပျစပျသညျ့ သငျ တနျးတှလေိုကျတကျ၊ ခေါငျးငွိတျရုံသကျသကျ အစညျးအဝေးတှမှော လိုကျထိုငျလို့လိုကျထိုငျ၊ နှုတျဆိတျဆိတျနရေသော အခမျးအနားတှမှော ကငျြလညျရနှငျ့ တျောတျောလေးကို အခြိနျတှေ ကုနျဆုံး ပုပျသိုးခဲ့ရသညျ။ယခုပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့ နှမြောလိုကျသညျ့ဖွဈခွငျး။ထိုကုနျဆုံးခဲ့သော အခြိနျကာလမြားထဲက တဈနှဈလောကျ သာ ယခုပွနျရကွညျ့.. ။တျောတျောလေးကို အကြိုးရှိလိမျ့မညျဖွဈသညျ။
ကိုယျ့အတှကျလဲ အကြိုးမရှိ၊ အမြားအတှကျလဲ အကြိုးမရှိပဲ၊ မလုပျ၊ မရှုပျ၊ မပွုတျဟူသောဆောငျပုဒျနှငျ့ ကငျြလညျခဲ့သော အစိုးရဝနျထမျးကာလမြားတှငျ ဘယျသူကဆုတျယုတျ၍ ဘယျသူကတိုးတကျသှားသလဲ ယခုစဉျးစားမိတော့ ကြှနျတျောတို့သာ အကြိုးယုတျခဲ့ရသညျ။ထိုကဲ့သို့ ပေါ့ပကျြပကျြ နှဈကာလကွာရှညျစှာနထေိုငျခဲ့ခွငျး၊ ကိုယျခန်ဓာသကျသာအောငျ ရသောခိုခဲ့ခွငျး၏ အကြိုးဆကျက ယခုအထိ စာရေးသူတို့ ခံနရေဆဲဖွဈသညျ။သခြောသညျကတော့ မွငျသာသညျ့ ရတေိုအပိုငျးတှငျ လတျတလော “သကျသာခြောငျခြိ” သညျဟု ထငျမှတျရသျောလညျး ရရှေညျ မမွငျသာသညျ့အပိုငျးတှငျမူ စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာယိုးယှငျး၍ စံမမီမှုက ထငျရှားစှာပျေါပေါကျ မွငျသာလာပသေညျ။
ထိုအကွောငျးကို စဉျးစားမိလသေောအခါ ငယျငယျက သငျခဲ့ရသညျ့ ဆရာပီမိုးနငျး ရေးသော “အလုပျဂုဏျ” ဆောငျးပါးကို သတိရမိသညျ။
ထိုထဲတှငျ ဆရာပီမိုးနငျး က “လူတို့ကို သေးနှုတျရမျသိမျဖငျြး နိမျ့ရာသို့ဆငျးစသေော နညျးလမျး မြားတှငျ အလုပျကိုပေါ့ပေါ့ဆဆ အပေါစားလုပျခွငျးသညျ အကွီးဆုံးသော အကွောငျးတဈခုဖွဈလသေညျ။အကွငျအလုပျသမား၊ အကွငျပညာတတျတဈယောကျသညျ မိမိအလုပျမြားကို ပေါ့ပေါ့ဆဆလုပျတတျသောအလကေို့ မြားစှာရရှိသောအခါ၌ ကိုယျတိုငျလဲ လူပေါ့ဖွဈကာ အဖိုးတနျသော အခွအေနမှေ သကျလြှောကရြောကျမညျက မလှဲပေ။” ဟု ဆိုထားသညျ။
အဘယျမြှမှနျလိုကျလသေနညျး။ကိုယျက သူမြားအကြိုးမရှိဖို့လုပျရာမှ ကိုယျကိုယျတိုငျလညျး တဈစတဈစနှငျ့ အကြိုးနညျးလာသညျအဖွဈမြိုး။ထိုအခြိနျတုနျးကတော့ ဒါကိုမမွငျနိုငျခဲ့။ယခုတော့ ထိုသို့လုပျခဲ့ ကငျြကွံခဲ့ခွငျး အကြိုးဆကျကွောငျ့ ပွငျပလောကသို့ထှကျသညျ့အခါ ထိုအခြိနျကိုဖွုနျးတီးတတျသညျ့ အကငျြ့ဆိုးကွီးက ဝသီတဈခုလို စှဲမွဲနခေဲ့သညျ။နောကျပိုငျးတော့ မကောငျးမှနျးသိ၍ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက ကိုယျ့ထကျအကငျြ့စာရိတ်တကောငျးသူ ပို၍တိုးတကျမွငျ့မားနသေူတို့ကို အတုယူကာ အကငျြ့ဆိုးကို ရနိုငျသလောကျပွငျခဲ့ရသညျ။ဒါတောငျ ယခုထိကနျြနသေေး။ဒီလိုအဖွဈမှာ ဘယျသူရှုံး၍ ဘယျသူမွတျခဲ့ပါသနညျး။သခြောသညျကတော့ ရသောခိုတတျသညျ့စိတျကွောငျ့ အခြိနျကောငျးတှေးကုနျကာ ဘဝတကျလမျးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျက ကတော့ အမှနျပဲ။
ထို့သို့ပငျ ယနခေ့တျေ လူငယျ၊ လူရှယျ၊ လူကွီးဆိုသော မှား/မှနျ တိကသြခြော အဆုံးအဖွတျဝဖေနျနိုငျသော လူပုဂ်ဂိုလျမြားတှငျ တဈခါတဈလအေကြိုးမရှိသော ကြောငျး၊ သငျတနျး၊ စုဝေး၊ စညျးဝေး ဆှေးနှေး စသော မညျသို့မှ ဘာမှထူးမလာနိုငျသညျ့ ကိစ်စရပျမြိုးကို အခြိနျပုပျခံ၍ တခုတျတရ ရေးကွီးခှငျကယျြ လုပျနတေတျကွသညျ။ထိုအရာက တဈခြိနျခြိနျမှာ အသုံးဝငျလာနိုငျသညျဆိုသော အတှေးနှငျ့။သို့သျော ယခုပငျလြှငျ အသုံးမဝငျလြှငျ နောငျအသုံးဝငျ/မဝငျဆိုတာ သိပျမသခြော။
ယနခေတျေ နိုငျငံတကာမှာပဲကွညျ့ကွညျ့ ပွညျတှငျးမှာပဲကွညျ့ကွညျ့ လုပျငနျးနယျပယျအသီးသီးတှငျ တှငျကယျြအောငျမွငျနသေညျ့ တကယျတတျကြှမျးသိရှိ ကြျောကွားသူတို့ကို လလေ့ာကွညျ့လြှငျ တဈရာမှာ တဈရာဆိုသလို ရာနှုနျးပွညျ့တူညီသောအခကျြမှာ သူတို့၏ အခြိနျအမြားစုကို အလဟဿအသုံးမပွုလိုကျကွခွငျးနှငျ့ မညျသို့သောကိစ်စကိုမှ အခညျြးအနှီးမဲ့ ရညျရှယျခကျြ၊ ဦးတညျခကျြမရှိပဲ မလုပျခွငျးပငျဖွဈသညျ။
တဈခါက ထငျရှားသော လုပျငနျးရှငျကွီးတဈဦး၏ အငျတာဗြူးတဈခုတှငျ အငျတာဗြူးသူက “အနျကယျ ခငျဗြား… အောငျမွငျသညျ့ လူတဈယောကျဖွဈဖို့ ဘာတှလေိုအပျပါသလဲ” ဆိုသော မေးခှနျးကို လုပျငနျးရှငျကွီးက “တကယျလိုတာက အခြိနျဆိုတာ ကိုယျ့အတှကျမဟုတျရငျတောငျ တဈခွားသူအတှကျ ထိရောကျအောငျအသုံးပွုနိုငျဖို့ပါပဲ“ ဟု ပွနျဖွခေဲ့သညျ။ထိုအမေးအဖွလေေးကို စတငျဖတျမိသညျ့အခြိနျကတညျးက သဘောကမြိခဲ့သညျ။
ဘာကွောငျ့ သဘောကသြလဲဆိုတာကို လူမြိုးနှငျ့ခြီ၍ ရာဇဝငျခငျးမှရမညျ။သညျအတှကျ တဈခြို့က ဆတျဆတျနာ၍ တခြို့က သှကျသှကျခါကွမညျ။သို့သျော တကယျနားလညျရိပျစားမိသူကတော့ သဘောကြ လကျခံပလေိမျ့မညျ။ဒါက တခွားမဟုတျ။မွနျမာတိုငျးရငျးသားအပါအဝငျ အာရှသား (ဝါ) အရှတေို့ငျးသားမြား၏ ပငျကိုဝသီစရိုကျကွောငျ့ အခြိနျတှပေုပျနရေသညျ။ထို ပငျကိုဝသီစရိုကျက သာမနျယဘေုယသြ ဘောကွညျ့လြှငျတော့ ခဈြစရာလိုလို၊ ဂုဏျယူစရာရာလိုလိုနှငျ့။တကယျတော့ သိပျကိုဆိုးရှားလှသညျ။ဒီစရိုကျမှာ လူတဈယောကျ (သို့မဟုတျ) ဧညျ့သညျတဈယောကျလာလြှငျ မပွီးနိုငျ မစီးနိုငျ ဧညျ့ဝတျပွုမှုနှငျ့ စကားကွောရှညျမှုပငျ။ထိုသို့ ပွုလုပျသဖွငျ့ ကိုယျ့ဆီက ဘာတှပေါသှား၍ သူ့ဆီက ဘာတှမြေား ကိုယျရလိုကျပါသနညျး။တကယျတော့ နှဈဦးစလုံးအခြိနျတှေ အကြိုးမဲ့ဆုံးရှုံးသှားသညျ့အပွငျ တခွားတခွားသော လုပျငနျးဆောငျတာမြား ခြိနျးထားမိလြှငျ လှဲကောငျးလှဲသှားနိုငျပသေညျ။အဘယျမြှဆိုးလှသနညျး။
မလိုအပျပဲ စကားရှညျခွငျး (ဝါ) အကြိုးမဲ့ စကားစမွညျပွောဆိုနခွေငျးသညျ တကယျစဉျးစားကွညျ့လြှငျ စကားပွောသူ နှဈဦး သုံးဦးကွား ရငျးနှီးမှုကို တိုးမလာစသေညျ့အပွငျ အခနျ့မသငျ့လြှငျ ရနျမီးရနျစကိုပငျ စတငျ၍ပှားမြားစနေိုငျလသေညျ။ဘာကွောငျ့မြား အပိုတှပွေောနကွေသနညျး။လကျနဲ့လုပျမှရမညျ့ကိစ်စကို ပါးစပျနှငျ့ပွော၍ လကေုနျရုံသာ ရှိပလေိမျ့မညျ။ဘာမြား ပို၍ထူးလာပလေိမျ့မညျနညျး။သာမနျလူအမြားစုမှာ ဘယျလောကျအခြိနျတှေ ပိုနသေလဲ ကုနျနသေလဲ၊ အခြိနျတှပေုပျနကွေသလဲဆိုတာ မနကျစောစော လကျဖကျရညျဆိုငျမှာကိုသာကွညျ့။မနကျလညျးပွော၊ နလေ့ယျလညျးပွော၊ ညဘကျ အရကျဆိုငျ၊ ဘီယာဆိုငျမှာလညျးပွောနှငျ့။သညျလောကျ နရေ့ကျဆကျ ပွောပွောနကွေတာ မပွီးနိုငျ မစီးနိုငျ။မငွီးငှနေို့ငျကွဘူး လား။ဘာတှမြေား သညျလောကျတောငျ ပွောစရာရှိနကွေပါလဲ။ဘာတှမြေား သညျလောကျ ရငျဖှငျ့နကွေပါသလဲ။
သညျလိုဆို၍ “မငျးရော ဒီအထဲမှာ မပါဘူးလား” ဟု မေးကွလြှငျ “ပါတာပေါ့ဗြာ ထိပျဆုံးကပေါ့” ဟု ဆိုရပလေိမျ့မညျ။သာမနျအား စကားတဈခှနျး နှဈခှနျးလောကျနှငျ့ ပွတျသညျ့ကိစ်စကို မလိုအပျပဲ စကားကွောရှညျနမှေုကွောငျ့ ရှိပွီးခငျမငျမှုထကျ တိုးပှားမလာဘဲ ရနျမြားကွသညျ့အဖွဈတှေ ပတျဝနျးကငျြမှာ မကွာခဏတှနေ့ရေသညျမဟုတျလား။လူတှကေ ဘာကွောငျ့မြား ”ဒီလူဖျော‌ရှသေညျ။ဧညျ့ဝတျကပြှေနျသညျ“ ဆိုသော စကားကို တလှဲတှေး၍ ဘာအကောကျအယူမှားနကွေပါသညျလဲ။ဂုဏျယူနကွေပါသလဲ။
အနောကျနိုငျငံတှမှောတော့ သူတို့ဓလထေုံ့းစံက ဒီလိုမဟုတျ။ခငျမငျရငျးနှီးသော သူငယျခငျြးမဆိုထားနှငျ့ အရငျးနှီးဆုံးဖွဈသော လငျနှငျ့ မယား အိမျထောငျဘကျအခငျြးခငျြးမှာတောငျ တဈယောကျအခြိနျကို တဈယောကျ တနျဖိုးထားပသေညျ။ဤသို့သောဓလကေို့ သူတို့က ငယျစဉျကပငျ ပွုစုပြိုးထောငျပေးခဲ့ကွသညျ။အဘယျမြှ ကောငျးသနညျး။တခွားတဖကျကတှေးလြှငျ စိမျးသညျ၊ စိမျးကားသညျဟု ဆိုနိုငျသျောလညျး ထိုလောကျမဟုတျလြှငျတောငျ တဝကျလောကျ စာရေးသူတို့ မွနျမာလူငယျ၊ လူရှယျတှေ ကိုယျ့အခြိနျကို သူမြားအခြိနျကို လေးစားပေးကွလြှငျ ယနခေ့တျေကဲ့သို့ လူ့အောကျကြ သူ့အောကျကြ အဖွဈမြိုးက အတနျအသငျ့ လြော့ပါးလိမျ့မညျဟု ထငျမိသညျ။
ကြှနျတျောတို့တှကေ အလုပျတဈခုကိုလုပျဖို့ (ဝါ) ကိစ်စတဈခုဆောငျရှကျဖို့ဆိုလြှငျ နရှေညေ့ရှနှေ့ငျ့ လုပျတတျကွတာ အမြားစုဖွဈသလို “လာ…. လကျဖကျရညျဆိုငျသှားမယျ၊ ဘီယာဆိုငျသှားမယျ“ ဆို သုတျကနဲ ဆှကေ့နဲက အမြားစု ဖွဈသညျ။တခွားမကွညျ့နှငျ့။ယနေ့ လကျဖကျရညျဆိုငျ၊ အရကျဆိုငျတှမှော ဘယျသူတှပေိုမြားနလေဲ။ယနခေ့တျေ လူဦးရအေခြိုးနှုနျးအရ လူနှဈဆယျမှာ ကုလားတဈယောကျ တရုတျတဈယောကျရှိတယျဆိုလြှငျတောငျ ထိုအရကျဆိုငျ၊ လကျဖကျရညျဆိုငျရှိ လူသုံးဆယျထဲမှာ တရုတျ၊ ကုလားဆိုတာကို တှဖေို့ရှားပလေိမျ့မညျ။သို့သျော ရှိတော့ရှိသညျဟု အတငျးအကပျြငွငျးလြှငျတော့ အဲဒါဆိုငျရှငျဟု ပွောရလိမျ့မညျဖွဈသညျ။မယုံလြှငျ ကိုယျ့အနီးအနားက ဆိုငျကိုသာကွညျ့။
မကောငျးသောအကငျြ့၊ မကောငျးသောစရိုကျတို့သညျ လူတို့၏ဓလစေ့ရိုကျနှငျ့ မြားစှာထိတှစေ့ရာမလိုဘဲ လြှငျမွနျစှာတဈသားတညျးကသြှားသညျ့ သဘောရှိ၏။ထိုသဘောကို လူပညာရှိ၊ ရဟနျးပညာရှိတို့က ကောငျးစှာသိမွငျ၍ ရှေးယခငျ ယခငျကပငျ ဆုံးမ၊ နီတိမြား ရေးသားခဲ့ကွသညျ။ဒါကို နောကျလူတို့မသိ၍မဟုတျ။မကောငျးမှုသိလကျြ ငယျစဉျကပငျ ထိတှဖေ့နျမြား၍ အစှဲဝငျကာ ဖြောကျဖကျြမရသဖွငျ့ ဤသို့ ဖွဈလာ ရခွငျးပငျ။သသေခြောခြာ စဉျးစားကွညျ့လြှငျ လှနျစှာထိတျလနျ့ဖှယျဖွဈသညျ။
ငယျစဉျကြောငျးသားဘဝက ငယျဆရာကို “ဆရာ ကြှနျတျော့ဘဝကို ဘယျလိုမွငျ့မားအောငျ၊ စညျး ကမျးရှိအောငျ၊ ဘယျလိုဘယျအဆငျ့ရောကျအောငျလုပျမှာ ဆရာ” ဟု လူစုံတုနျးကွုံးဝါးပွတော့ ဆရာကရယျပွီး ခေါငျးကိုပုတျကာ “ဟကေ့ောငျ တကယျခြှနျမယျ့ကောငျက သူအလုပျသူ သိပွီး သခြောလုပျတာကှ။မငျးလိုအခြိနျကုနျခံပွီး လိုကျကွုံးဝါးနတောမဟုတျဘူး။လိမ်မာခငျြတဲ့ခှေး အမှေးတခွားပါကှာ“ ဟု ပညာသားပါပါ ဆုံးမခဲ့သညျ။ဟိုတုနျးက ဆရာအပျေါ စိတျကှကျမိသျောလညျး ယခုတော့ဟုတျသားပဲဟု ဆရာစကားကို ထောကျခံမိသညျ။
ယခုလညျး ကိုယျနှငျ့မဆိုငျသော မညျသို့မှလဲ အကွောငျးမထူးသော နဂိုကတညျးက အဖွရှေိနပွေီးသားကိစ်စရပျမြားကို ပွနျလညျအဖွရှောနသေော၊ အကြိုးမရှိသောလုပျရပျနှငျ့ အခြိနျကုနျနကွေသညျ့ လူငယျ လူရှယျ လူကွီးတှကေို တှမွေ့ငျရသညျ့အခါ စိတျထဲ ဪ….. ငါ့လိုလူတှေ အမြားသားဟု သကျပွငျးခမြိသညျ။ငယျသညျသူမြားဆိုထားတော့။အခြို့အခြို့ဆို လြှောကျလာခဲ့သညျ့ လမျးကိုလညျး သိပွီး တှပွေီ့း မွငျပွီး ဖွဈသညျ။နောငျဘယျလို လြှောကျတော့မညျ လြှောကျနိုငျသညျ့ဆိုတာကို သိပွီးသားနှငျ့တောငျ အခြိနျပုပျခံပွီး တဈခမျးတဈနား ပွောဆိုတိုငျပငျတတျသညျ့ ဝသီကပါနလေတေော့ “စကားပွော ဟော တသောသောနှငျ့ ရယျမော၍လညျးမနနှေငျ့“ ဟူသော ရှေးဆုံးမစာ ကဗြာစာသားကို မွငျသာအောငျ ခြိတျဆှဲပွထားရမလိုပငျ။
ဒီနရောမှာ “သဈပငျကို ပါးစပျနှငျ့ စိုကျ၍မရ၊ လကျနှငျ့စိုကျပြိုးမှရလိမျ့မညျ” ဆိုသော စကားကို သတိရမိသညျ။တဈစုံတဈခုသောကိစ်စတှမှော ကြှနျတျောတို့ ဘာတှမြေားမှားခဲ့၊ မြားခဲ့ကွသနညျး။မှားခဲ့၊ မြားခဲ့ပွီဆိုလြှငျ ယခုအခြိနျမှာတော့ အခြိနျပုပျသညျ၊ အပုပျခြိနျကာလကို လှတျမွောကျဖို့ ကိုယျဘာတှပွေုပွငျရမညျဆိုတာ သိဖို့ကောငျးနပွေီ မဟုတျပါလား။
အကယျ၍ သိခဲ့မွငျခဲ့သညျတိုငျ ဒီအရှယျကွီးရောကျမှ ဒီအထိရောကျပွီးမှ ဘာထူးတော့မှာလဲဟု အရှုံးပေးသညျ့စိတျမြိုး၊ အတှေးမြိုး တှေးမိနလြှေငျတော့ ကိုယျ့အတှကျအကြိုးမရှိနိုငျပမေဲ့ နောငျလာမဲ့ မြိုးဆကျတှအေတှကျ ဒီအကငျြ့ပကျြတှမေကူးစဖေို့ ရှိမနစေဖေို့ ပွငျစခေငျြခွငျးဖွဈသညျ။
ပွငျခွငျး မပွငျခွငျးကတော့ ကိုယျကိုယျတိုငျရေးတဲ့ သမိုငျးရဲ့ အဆိုးအကောငျး နောကျဆုံးစီရငျခကျြသာ ဖွဈပလေိမျ့မညျ။ဒီစီရငျခကျြက ကိုယျ့ဘာသာကိုခသြညျ့ စီရငျခကျြဖွဈသညျ။ကနျြသညျ့အခြိနျတှကေို ကိုယျနဲ့ အမြားအတှကျ တနျဖိုးရှိရှိ သုံးမလား၊ ဖွုနျးမလားဆိုတာ ရှေးရမညျ။သငျဘယျလိုမြားဆုံးဖွတျပါသလဲ။
ဒီလိုပဲ နကွေမှာလား…. ။ပွငျကွမှာလား…… ဟု။
ဒီဇငျဘာ - ၁၂
ငယ်စဉ်ကာလ ကျောင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုကာနီး စာမေးပွဲအတွက် အထောက်အကူမပေးနိုင်သည့် အလုပ်မျိုးလုပ်နေသည့်အခါ ဆရာ/ဆရာမတွေက “တယ်…. ဒီကလေးတွေ တော်တော်အချိန်ပိုနေလား အချိန်ပုပ်အောင်လုပ်နေပါလား” ဟု ဆူကြသည်။အရွယ်ရောက်လို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သည့်အခါ ကျောင်းထဲ သင်ဖော်သင်ဖက် ဆရာ/ဆရာမ တစ်ယောက်နှင့် ထွေရာလေပါး ပြောကြသည့်အချိန်ကြာနေခဲ့လျှင် ဆရာကြီးက မကျေမနပ် ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နှင့် “.. ဒီကောင်တွေ အချိန်ပိုနေလား… ၊ အပုပ်ချိန်တွေတော်တော်များနေပြီ” ဟု ဆိုလေ့ရှိ၏။ထို့ကြောင့် စာရေးသူမှာထို “အချိန်ပုပ်=အပုပ်ချိန်” ဟူသော စကားရပ်နှင့် အတော်လေးရင်းနှီးနေမိသည်။သို့သော် စကား၏ နက်နဲသောအဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ သတိသိပ်မထားမိချေ။
လုပ်ငန်းခွင်မှထွက် ပြင်ပလောကသို့ရောက်သည့်အခါ ဘဝတက္ကသိုလ်မှာ အပြင်းအထန်ရုန်းကန် နေရသည့်ကာလကြမှ ထိုအပုပ်ချိန်ဆိုသော စကား၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ထို့အတူ စိတ်ထဲကလည်း ထိုအချိန်ကာလများကို ပြန်လည်နှမျောမိလေသည်။အဘယ်ကြောင့်များနည်း…. ။ ?
အပုပ်ချိန် (ဝါ) အချိန်ပုပ်ဆိုတော့ စကားရပ်သည် မြန်မာစာအဘိဓာန်တွင် မည်သို့အဓိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်တော့ စာရေးသူမသိ။ကျွန်တော် နားလည်သဘောပေါက်မိသည်ကတော့ - အကျိုးမရှိသည့်အလုပ် (ဝါ) အဖြေရှိပြီးသား ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို အချိန်ကုန်ခံခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစား ပြောင်းလဲမှုရှိမလာနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ထပ်ဖန်တစ်လဲလဲအသုံးချ၍ အချိန်ကုန်ဆုံးစေခြင်း (ဝါ) အကျိုးမဲ့ အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းဟု နားလည်မိလေသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာရေးသူဝန်ထမ်းဘဝကကုန်ခဲ့သော အချိန်ကာလများသည် အထက်ကဆိုသော ပုံစံမျိုးနှင့်သာ ကျွန်တော်တို့ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ရ၍ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်ကာလများတွင် သူများယောင်၍ လိုက်ယောင်ကာ ကိုယ်နှင့် မည်သို့မှမအပ်စပ်သည့် သင် တန်းတွေလိုက်တက်၊ ခေါင်းငြိတ်ရုံသက်သက် အစည်းအဝေးတွေမှာ လိုက်ထိုင်လို့လိုက်ထိုင်၊ နှုတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရသော အခမ်းအနားတွေမှာ ကျင်လည်ရနှင့် တော်တော်လေးကို အချိန်တွေ ကုန်ဆုံး ပုပ်သိုးခဲ့ရသည်။ယခုပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ နှမျောလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ထိုကုန်ဆုံးခဲ့သော အချိန်ကာလများထဲက တစ်နှစ်လောက် သာ ယခုပြန်ရကြည့်.. ။တော်တော်လေးကို အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်အတွက်လဲ အကျိုးမရှိ၊ အများအတွက်လဲ အကျိုးမရှိပဲ၊ မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ်ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့် ကျင်လည်ခဲ့သော အစိုးရဝန်ထမ်းကာလများတွင် ဘယ်သူကဆုတ်ယုတ်၍ ဘယ်သူကတိုးတက်သွားသလဲ ယခုစဉ်းစားမိတော့ ကျွန်တော်တို့သာ အကျိုးယုတ်ခဲ့ရသည်။ထိုကဲ့သို့ ပေါ့ပျက်ပျက် နှစ်ကာလကြာရှည်စွာနေထိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာသက်သာအောင် ရေသာခိုခဲ့ခြင်း၏ အကျိုးဆက်က ယခုအထိ စာရေးသူတို့ ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။သေချာသည်ကတော့ မြင်သာသည့် ရေတိုအပိုင်းတွင် လတ်တလော “သက်သာချောင်ချိ” သည်ဟု ထင်မှတ်ရသော်လည်း ရေရှည် မမြင်သာသည့်အပိုင်းတွင်မူ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယိုးယွင်း၍ စံမမီမှုက ထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက် မြင်သာလာပေသည်။
ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားမိလေသောအခါ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရသည့် ဆရာပီမိုးနင်း ရေးသော “အလုပ်ဂုဏ်” ဆောင်းပါးကို သတိရမိသည်။
ထိုထဲတွင် ဆရာပီမိုးနင်း က “လူတို့ကို သေးနှုတ်ရမ်သိမ်ဖျင်း နိမ့်ရာသို့ဆင်းစေသော နည်းလမ်း များတွင် အလုပ်ကိုပေါ့ပေါ့ဆဆ အပေါစားလုပ်ခြင်းသည် အကြီးဆုံးသော အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လေသည်။အကြင်အလုပ်သမား၊ အကြင်ပညာတတ်တစ်ယောက်သည် မိမိအလုပ်များကို ပေါ့ပေါ့ဆဆလုပ်တတ်သောအလေ့ကို များစွာရရှိသောအခါ၌ ကိုယ်တိုင်လဲ လူပေါ့ဖြစ်ကာ အဖိုးတန်သော အခြေအနေမှ သက်လျှောကျရောက်မည်က မလွဲပေ။” ဟု ဆိုထားသည်။
အဘယ်မျှမှန်လိုက်လေသနည်း။ကိုယ်က သူများအကျိုးမရှိဖို့လုပ်ရာမှ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်စတစ်စနှင့် အကျိုးနည်းလာသည်အဖြစ်မျိုး။ထိုအချိန်တုန်းကတော့ ဒါကိုမမြင်နိုင်ခဲ့။ယခုတော့ ထိုသို့လုပ်ခဲ့ ကျင်ကြံခဲ့ခြင်း အကျိုးဆက်ကြောင့် ပြင်ပလောကသို့ထွက်သည့်အခါ ထိုအချိန်ကိုဖြုန်းတီးတတ်သည့် အကျင့်ဆိုးကြီးက ဝသီတစ်ခုလို စွဲမြဲနေခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတော့ မကောင်းမှန်းသိ၍ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ထက်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းသူ ပို၍တိုးတက်မြင့်မားနေသူတို့ကို အတုယူကာ အကျင့်ဆိုးကို ရနိုင်သလောက်ပြင်ခဲ့ရသည်။ဒါတောင် ယခုထိကျန်နေသေး။ဒီလိုအဖြစ်မှာ ဘယ်သူရှုံး၍ ဘယ်သူမြတ်ခဲ့ပါသနည်း။သေချာသည်ကတော့ ရေသာခိုတတ်သည့်စိတ်ကြောင့် အချိန်ကောင်းတွေးကုန်ကာ ဘဝတက်လမ်းကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်က ကတော့ အမှန်ပဲ။
ထို့သို့ပင် ယနေ့ခေတ် လူငယ်၊ လူရွယ်၊ လူကြီးဆိုသော မှား/မှန် တိကျသေချာ အဆုံးအဖြတ်ဝေဖန်နိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များတွင် တစ်ခါတစ်လေအကျိုးမရှိသော ကျောင်း၊ သင်တန်း၊ စုဝေး၊ စည်းဝေး ဆွေးနွေး စသော မည်သို့မှ ဘာမှထူးမလာနိုင်သည့် ကိစ္စရပ်မျိုးကို အချိန်ပုပ်ခံ၍ တခုတ်တရ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်နေတတ်ကြသည်။ထိုအရာက တစ်ချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်လာနိုင်သည်ဆိုသော အတွေးနှင့်။သို့သော် ယခုပင်လျှင် အသုံးမဝင်လျှင် နောင်အသုံးဝင်/မဝင်ဆိုတာ သိပ်မသေချာ။
ယနေခေတ် နိုင်ငံတကာမှာပဲကြည့်ကြည့် ပြည်တွင်းမှာပဲကြည့်ကြည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်အောင်မြင်နေသည့် တကယ်တတ်ကျွမ်းသိရှိ ကျော်ကြားသူတို့ကို လေ့လာကြည့်လျှင် တစ်ရာမှာ တစ်ရာဆိုသလို ရာနှုန်းပြည့်တူညီသောအချက်မှာ သူတို့၏ အချိန်အများစုကို အလဟဿအသုံးမပြုလိုက်ကြခြင်းနှင့် မည်သို့သောကိစ္စကိုမှ အချည်းအနှီးမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဦးတည်ချက်မရှိပဲ မလုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါက ထင်ရှားသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦး၏ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် အင်တာဗျူးသူက “အန်ကယ် ခင်ဗျား… အောင်မြင်သည့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ” ဆိုသော မေးခွန်းကို လုပ်ငန်းရှင်ကြီးက “တကယ်လိုတာက အချိန်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ရင်တောင် တစ်ခြားသူအတွက် ထိရောက်အောင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပါပဲ“ ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ထိုအမေးအဖြေလေးကို စတင်ဖတ်မိသည့်အချိန်ကတည်းက သဘောကျမိခဲ့သည်။
ဘာကြောင့် သဘောကျသလဲဆိုတာကို လူမျိုးနှင့်ချီ၍ ရာဇဝင်ခင်းမှရမည်။သည်အတွက် တစ်ချို့က ဆတ်ဆတ်နာ၍ တချို့က သွက်သွက်ခါကြမည်။သို့သော် တကယ်နားလည်ရိပ်စားမိသူကတော့ သဘောကျ လက်ခံပေလိမ့်မည်။ဒါက တခြားမဟုတ်။မြန်မာတိုင်းရင်းသားအပါအဝင် အာရှသား (ဝါ) အရှေ့တိုင်းသားများ၏ ပင်ကိုဝသီစရိုက်ကြောင့် အချိန်တွေပုပ်နေရသည်။ထို ပင်ကိုဝသီစရိုက်က သာမန်ယေဘုယျသ ဘောကြည့်လျှင်တော့ ချစ်စရာလိုလို၊ ဂုဏ်ယူစရာရာလိုလိုနှင့်။တကယ်တော့ သိပ်ကိုဆိုးရွားလှသည်။ဒီစရိုက်မှာ လူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) ဧည့်သည်တစ်ယောက်လာလျှင် မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ဧည့်ဝတ်ပြုမှုနှင့် စကားကြောရှည်မှုပင်။ထိုသို့ ပြုလုပ်သဖြင့် ကိုယ့်ဆီက ဘာတွေပါသွား၍ သူ့ဆီက ဘာတွေများ ကိုယ်ရလိုက်ပါသနည်း။တကယ်တော့ နှစ်ဦးစလုံးအချိန်တွေ အကျိုးမဲ့ဆုံးရှုံးသွားသည့်အပြင် တခြားတခြားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ချိန်းထားမိလျှင် လွဲကောင်းလွဲသွားနိုင်ပေသည်။အဘယ်မျှဆိုးလှသနည်း။
မလိုအပ်ပဲ စကားရှည်ခြင်း (ဝါ) အကျိုးမဲ့ စကားစမြည်ပြောဆိုနေခြင်းသည် တကယ်စဉ်းစားကြည့်လျှင် စကားပြောသူ နှစ်ဦး သုံးဦးကြား ရင်းနှီးမှုကို တိုးမလာစေသည့်အပြင် အခန့်မသင့်လျှင် ရန်မီးရန်စကိုပင် စတင်၍ပွားများစေနိုင်လေသည်။ဘာကြောင့်များ အပိုတွေပြောနေကြသနည်း။လက်နဲ့လုပ်မှရမည့်ကိစ္စကို ပါးစပ်နှင့်ပြော၍ လေကုန်ရုံသာ ရှိပေလိမ့်မည်။ဘာများ ပို၍ထူးလာပေလိမ့်မည်နည်း။သာမန်လူအများစုမှာ ဘယ်လောက်အချိန်တွေ ပိုနေသလဲ ကုန်နေသလဲ၊ အချိန်တွေပုပ်နေကြသလဲဆိုတာ မနက်စောစော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကိုသာကြည့်။မနက်လည်းပြော၊ နေ့လယ်လည်းပြော၊ ညဘက် အရက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်မှာလည်းပြောနှင့်။သည်လောက် နေ့ရက်ဆက် ပြောပြောနေကြတာ မပြီးနိုင် မစီးနိုင်။မငြီးငွေ့နိုင်ကြဘူး လား။ဘာတွေများ သည်လောက်တောင် ပြောစရာရှိနေကြပါလဲ။ဘာတွေများ သည်လောက် ရင်ဖွင့်နေကြပါသလဲ။
သည်လိုဆို၍ “မင်းရော ဒီအထဲမှာ မပါဘူးလား” ဟု မေးကြလျှင် “ပါတာပေါ့ဗျာ ထိပ်ဆုံးကပေါ့” ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။သာမန်အား စကားတစ်ခွန်း နှစ်ခွန်းလောက်နှင့် ပြတ်သည့်ကိစ္စကို မလိုအပ်ပဲ စကားကြောရှည်နေမှုကြောင့် ရှိပြီးခင်မင်မှုထက် တိုးပွားမလာဘဲ ရန်များကြသည့်အဖြစ်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏတွေ့နေရသည်မဟုတ်လား။လူတွေက ဘာကြောင့်များ ”ဒီလူဖော်‌ရွေသည်။ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည်“ ဆိုသော စကားကို တလွဲတွေး၍ ဘာအကောက်အယူမှားနေကြပါသည်လဲ။ဂုဏ်ယူနေကြပါသလဲ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ သူတို့ဓလေ့ထုံးစံက ဒီလိုမဟုတ်။ခင်မင်ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းမဆိုထားနှင့် အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်သော လင်နှင့် မယား အိမ်ထောင်ဘက်အချင်းချင်းမှာတောင် တစ်ယောက်အချိန်ကို တစ်ယောက် တန်ဖိုးထားပေသည်။ဤသို့သောဓလေ့ကို သူတို့က ငယ်စဉ်ကပင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ကြသည်။အဘယ်မျှ ကောင်းသနည်း။တခြားတဖက်ကတွေးလျှင် စိမ်းသည်၊ စိမ်းကားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ထိုလောက်မဟုတ်လျှင်တောင် တဝက်လောက် စာရေးသူတို့ မြန်မာလူငယ်၊ လူရွယ်တွေ ကိုယ့်အချိန်ကို သူများအချိန်ကို လေးစားပေးကြလျှင် ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ လူ့အောက်ကျ သူ့အောက်ကျ အဖြစ်မျိုးက အတန်အသင့် လျော့ပါးလိမ့်မည်ဟု ထင်မိသည်။
ကျွန်တော်တို့တွေက အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ (ဝါ) ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလျှင် နေရွှေ့ညရွှေ့နှင့် လုပ်တတ်ကြတာ အများစုဖြစ်သလို “လာ…. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမယ်၊ ဘီယာဆိုင်သွားမယ်“ ဆို သုတ်ကနဲ ဆွေ့ကနဲက အများစု ဖြစ်သည်။တခြားမကြည့်နှင့်။ယနေ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ အရက်ဆိုင်တွေမှာ ဘယ်သူတွေပိုများနေလဲ။ယနေ့ခေတ် လူဦးရေအချိုးနှုန်းအရ လူနှစ်ဆယ်မှာ ကုလားတစ်ယောက် တရုတ်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလျှင်တောင် ထိုအရက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိ လူသုံးဆယ်ထဲမှာ တရုတ်၊ ကုလားဆိုတာကို တွေ့ဖို့ရှားပေလိမ့်မည်။သို့သော် ရှိတော့ရှိသည်ဟု အတင်းအကျပ်ငြင်းလျှင်တော့ အဲဒါဆိုင်ရှင်ဟု ပြောရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။မယုံလျှင် ကိုယ့်အနီးအနားက ဆိုင်ကိုသာကြည့်။
မကောင်းသောအကျင့်၊ မကောင်းသောစရိုက်တို့သည် လူတို့၏ဓလေ့စရိုက်နှင့် များစွာထိတွေ့စရာမလိုဘဲ လျှင်မြန်စွာတစ်သားတည်းကျသွားသည့် သဘောရှိ၏။ထိုသဘောကို လူပညာရှိ၊ ရဟန်းပညာရှိတို့က ကောင်းစွာသိမြင်၍ ရှေးယခင် ယခင်ကပင် ဆုံးမ၊ နီတိများ ရေးသားခဲ့ကြသည်။ဒါကို နောက်လူတို့မသိ၍မဟုတ်။မကောင်းမှုသိလျက် ငယ်စဉ်ကပင် ထိတွေ့ဖန်များ၍ အစွဲဝင်ကာ ဖျောက်ဖျက်မရသဖြင့် ဤသို့ ဖြစ်လာ ရခြင်းပင်။သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်လျှင် လွန်စွာထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝက ငယ်ဆရာကို “ဆရာ ကျွန်တော့်ဘဝကို ဘယ်လိုမြင့်မားအောင်၊ စည်း ကမ်းရှိအောင်၊ ဘယ်လိုဘယ်အဆင့်ရောက်အောင်လုပ်မှာ ဆရာ” ဟု လူစုံတုန်းကြုံးဝါးပြတော့ ဆရာကရယ်ပြီး ခေါင်းကိုပုတ်ကာ “ဟေ့ကောင် တကယ်ချွန်မယ့်ကောင်က သူအလုပ်သူ သိပြီး သေချာလုပ်တာကွ။မင်းလိုအချိန်ကုန်ခံပြီး လိုက်ကြုံးဝါးနေတာမဟုတ်ဘူး။လိမ္မာချင်တဲ့ခွေး အမွှေးတခြားပါကွာ“ ဟု ပညာသားပါပါ ဆုံးမခဲ့သည်။ဟိုတုန်းက ဆရာအပေါ် စိတ်ကွက်မိသော်လည်း ယခုတော့ဟုတ်သားပဲဟု ဆရာစကားကို ထောက်ခံမိသည်။
ယခုလည်း ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သော မည်သို့မှလဲ အကြောင်းမထူးသော နဂိုကတည်းက အဖြေရှိနေပြီးသားကိစ္စရပ်များကို ပြန်လည်အဖြေရှာနေသော၊ အကျိုးမရှိသောလုပ်ရပ်နှင့် အချိန်ကုန်နေကြသည့် လူငယ် လူရွယ် လူကြီးတွေကို တွေ့မြင်ရသည့်အခါ စိတ်ထဲ ဪ….. ငါ့လိုလူတွေ အများသားဟု သက်ပြင်းချမိသည်။ငယ်သည်သူများဆိုထားတော့။အချို့အချို့ဆို လျှောက်လာခဲ့သည့် လမ်းကိုလည်း သိပြီး တွေ့ပြီး မြင်ပြီး ဖြစ်သည်။နောင်ဘယ်လို လျှောက်တော့မည် လျှောက်နိုင်သည့်ဆိုတာကို သိပြီးသားနှင့်တောင် အချိန်ပုပ်ခံပြီး တစ်ခမ်းတစ်နား ပြောဆိုတိုင်ပင်တတ်သည့် ဝသီကပါနေလေတော့ “စကားပြော ဟော တသောသောနှင့် ရယ်မော၍လည်းမနေနှင့်“ ဟူသော ရှေးဆုံးမစာ ကဗျာစာသားကို မြင်သာအောင် ချိတ်ဆွဲပြထားရမလိုပင်။
ဒီနေရာမှာ “သစ်ပင်ကို ပါးစပ်နှင့် စိုက်၍မရ၊ လက်နှင့်စိုက်ပျိုးမှရလိမ့်မည်” ဆိုသော စကားကို သတိရမိသည်။တစ်စုံတစ်ခုသောကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေများမှားခဲ့၊ များခဲ့ကြသနည်း။မှားခဲ့၊ များခဲ့ပြီဆိုလျှင် ယခုအချိန်မှာတော့ အချိန်ပုပ်သည်၊ အပုပ်ချိန်ကာလကို လွတ်မြောက်ဖို့ ကိုယ်ဘာတွေပြုပြင်ရမည်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းနေပြီ မဟုတ်ပါလား။
အကယ်၍ သိခဲ့မြင်ခဲ့သည်တိုင် ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှ ဒီအထိရောက်ပြီးမှ ဘာထူးတော့မှာလဲဟု အရှုံးပေးသည့်စိတ်မျိုး၊ အတွေးမျိုး တွေးမိနေလျှင်တော့ ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ပေမဲ့ နောင်လာမဲ့ မျိုးဆက်တွေအတွက် ဒီအကျင့်ပျက်တွေမကူးစေဖို့ ရှိမနေစေဖို့ ပြင်စေချင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြင်ခြင်း မပြင်ခြင်းကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ သမိုင်းရဲ့ အဆိုးအကောင်း နောက်ဆုံးစီရင်ချက်သာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဒီစီရင်ချက်က ကိုယ့်ဘာသာကိုချသည့် စီရင်ချက်ဖြစ်သည်။ကျန်သည့်အချိန်တွေကို ကိုယ်နဲ့ အများအတွက် တန်ဖိုးရှိရှိ သုံးမလား၊ ဖြုန်းမလားဆိုတာ ရွေးရမည်။သင်ဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ပါသလဲ။
ဒီလိုပဲ နေကြမှာလား…. ။ပြင်ကြမှာလား…… ဟု။
ဒီဇင်ဘာ - ၁၂